Vaovao - Nahazo ny China Industrial Award ny tetikasa fitrandrahana dipoavatra biolojika Chenguang
Antsoy izahay: +8615600247717
Fandraisana anjara amin'ny sakafo sy legioma
Mitrandraka voa voa
Mitrandraka tsilo amin'ny ronono
Fanesorana tsaramaso kafe
Menaka sy proteinina
Tetikasa fitrandrahana dipoavatra biolojika Chenguang no nahazo ny China Industrial Award
Tamin'ny 27 Desambra, ny federasiona ara-toekarena indostrialy Sina dia nanao ny Fihaonamben'ny mari-pankasitrahana indostrialy sinoa fahenina tany Beijing. Orinasa sy tetikasa 93 no nahazo ny mari-pankasitrahana China Industrial, loka fiderana ary loka fanendrena azy. Nahazo ny loka fankasitrahana ny vondrona teknolojia Chenguang biotechnology “Tetikasa fitrandrahana Pepper sy fitaovana fanavaozana ny indostria ary ny indostrialy”.
Ny vokatra fitrandrahana capsicum dia capsanthin sy capsaicin, izay be mpampiasa amin'ny sakafo, fanafody ary saha hafa, ary ilaina amin'ny fiainana maoderina. Tamin'ny taona 1950, Etazonia no nitarika ny fitrandrahana an'i Capsanthin tamin'ny dipoavatra, nitarika ny fironana indostrialy. Taty aoriana, anjakan'i Etazonia, Espana ary India ny indostria. Vao niditra ny indostrian'ny fitrandrahana dipoavatra i Shina tamin'ny taona 1980, niaraka tamin'ny fanombohana tara, ny teknolojia famokarana mihemotra ary ny vokatra tsy ampy. Na dia firenena lehibe manana loharanon-tsakay aza izy dia mila hafarana avy any ivelany ny vokany.
Ny biolojika Chenguang dia niditra tao amin'ny indostrian'ny fitrandrahana dipoavatra tamin'ny taona 2000. Nandresy teknolojia fanodinana maromaro izy, toy ny fanodinana dipoavatra amin'ny tanany, fitrandrahana gradien contrecent contrecurrent mitohy, fisarahana centrifugal mitohy amin'ny sehatra marobe, ary nananganana ny fitrandrahana dipoavatra lehibe indrindra tsipika famokarana any Shina. Ny fahaizan'ny famokarana dia nohatsaraina betsaka. Amin'ny alàlan'ny fanatsarana sy fanavaozana mitohy, amin'izao fotoana izao, ny tsipika famokarana tokana dia manamboatra akora 1100 taonina isan'andro, an-jatony heny mihoatra ny taloha ny famokarana herinaratra feno mandritra ny 100 andro dia afaka mamaly ny fangatahana manerantany. Ny capsaicin sy ny capsaicin dia nalaina niaraka. Ny vokatra capsaicin dia nitombo hatramin'ny 35% ka hatramin'ny 95% raha ny vokatra capsaicin kosa dia nitombo 4 na 5 isa isan-jato hatramin'ny 98%. Ny fatiantoka solvent isaky ny taonina ny akora dia nahena hatramin'ny 300 kg ka latsaky ny 3 kg tamin'ny alàlan'ny fanatsarana ny fizotran'ny tsindry négatif tsy tapaka. Ny teknolojia indostrialy misy kristaly capsaicin fahadiovana avo lenta, fitrandrahana supercritical pigment mena capicum, pigment red capicum ary microemulsion capsaicin dia novolavolaina tany Chine.
Ny fikarohana biolojika Chenguang dia nahitana ny loharanom-pahalotoana sy ny fitsipiky ny fifindra-monina momba ny akora manimba amin'ny dipoavatra sy ny vokatra nalaina avy aminy, nanavao sy namolavola ny teknolojia fanesorana ny mena Sudan, Rhodamine B ary ny residu pestiside organofosidra amin'ny vokatra, nametraka ny rafitra fiantohana kalitao sy fiarovana ho an'ny ny fizotran'ny dipoavatra manomboka amin'ny fambolena, fijinjana, fitahirizana ary fitaterana mankany amin'ny fanodinana, ary namolavola ny fenitra nasionaly ho an'ny akora, vokatra ary fomba fikarohana. Ny kalitaon'ny vokatra dia mahafaly Mihaona amin'ny fangatahana tsena avo lenta eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena.
Nandritra ny fampiharana ny teknolojia fitrandrahana dipoavatra sy ny fanavaozana ny tetik'asa ary ny indostrian'ny indostria dia nisy patanty famoronana nasionaly 38 ary patanty fampiasana vaovao 5 no azo. Miaraka amin'ny haitao mandroso, fitaovana ary indostrialy, ny anjaran'ny tsenan'ny red capicum, izay novokarina tsy miankina tany Chine, dia nitombo hatramin'ny 2% ka hatramin'ny 80% teo amin'ny tsena manerantany (mitentina 60% ny biolojika Chenguang), ary ny capsaicin dia manana nitombo hatramin'ny 0,2% ka hatramin'ny 50% (mitahiry 40% ny biolojika Chenguang), izay nahazo an'i China ny zony hiteny eo amin'ny tsena iraisam-pirenena momba ny indostrian'ny fitrandrahana dipoavatra.
Ny mari-pankasitrahana China Industrial no loka ambony indrindra amin'ny sehatry ny indostria sinoa nankatoavin'ny filankevi-panjakana. Voafantina isaky ny roa taona hametrahana orinasa sy tetikasa benchmarking tena tsara ary handroaka ny fananganana orinasa marobe miaraka amin'ny fifaninanana ifotony.
Fotoana fandefasana: Jan-15-2021